★မြန်မာ့အလင်း★: ခွေးလောက်မှ မစောင့်စည်းနိုင်တဲ့ ကျွန်ကုလား
ပြောပြန်ရင်လည်း လွန်တယ်ဖြစ်ဦးမယ်။ အထက်က ဗီဒီယိုကတော့ ကုလားတွေကို ခွေးလို ၀က်လိုသေရဲအောင် မိန်းမပြပြီး စည်းရုံးထားတာပါ။ အပျိုစင်ကို လိုချင်ရင် သေခံပါတဲ့။ မိန်းမပြပြီး သေရဲအောင် စည်းရုံးတယ်ဆိုတာ စည်းရုံးခံရတဲ့သူနဲ့ စည်းရုံးနေတဲ့သူတွေဟာ ရာဂဘယ်လောက်ထူလဲ သိနိုင်ပါတယ်။ ပလီဆရာတွေက မိန်းခလေးတွေဟာ Hijab မ၀တ်လို့ မုဒိမ်းကျင့်ခံရတာဆိုပြီး ပြောဆိုတာတွေ ကြားဖူးကြမှာပါ။ တကယ်တော့ မိန်းခလေးတွေ ဘယ်လိုပဲဝတ်ဝတ် ဘယ်လိုပဲနေနေ.. သူ့အလှကိုမြင်တာနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ရမှာလား? စောင့်ထိမ်းမှုနဲ့ အကျင့်သီလကို မွတ်ဆလင်တွေ လုံးဝမသိရှာဘူးနော်။ လူမပြောနဲ့ ခွေးတွေတောင် မွတ်ဆလင်တွေထက်အများကြီး စောင့်ထိမ်းမှုရှိတယ်။ ခွေးမတွေဆိုတာ Hijab ၀တ်ဖို့နေနေသာသာ. . . အရှက်ကို ဘာနဲ့မှ ဖုံးထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ခွေးမကိုမြင်ပြီး စိတ်ကိုမထိမ်းနိုင်လို့ … မုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ ခွေးထီး မရှိပါဘူး။ မွတ်ဆလင်တွေကတော့ လက်မောင်းသားမြင်ရင်တောင် မထိမ်းနိုင်လို့ မုဒိမ်းကျင့်မှု ဖြစ်ရတယ်ဆိုပဲ။ ခွေးလောက်မှ အကျင့်သီလမရှိတဲ့ ကုလားတွေပါပဲ။
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လောက်အထိ အကျင့်သီလတွေ ကင်းမဲ့လဲဆိုရင် . . . ရာဂစိတ်ထပြီဆိုရင် သားဖြစ်သူက သူတို့အမေကို ပြန်ပြီးမုဒိမ်းကျင့်တာ… အဖေက သူတို့ သမီးအရင်းတွေကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ ဇတ်လမ်းတွေက မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်ကုလားတွေ မျက်နှာက ကျက်သရေလုံးဝမရှိပဲ. . . . ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံခံစားနေရတာ ဘာများထူးဆန်းသလဲနော်? အဲလောက် စောင့်ထိမ်းမှုမရှိတဲ့ ကုလားတွေကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မိန်းမနဲ့ သမီးတွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံ ခွင့်ပေးချင်သေးလား?